IDisney + izofika eYurophu ngesonto ngaphambi kwalokho obekulindelekile | Izindaba zamagajethi
IDisney + izofika eYurophu ngaphambi kwesikhathi ebesilindelwe
URafa Rodríguez Ballesteros | | Ama-movie nochungechunge, Izaziso
Siphakathi "kwempi" yesihlalo sobukhosi samapulatifomu okusakaza. I-Netflix enamandla onke ithola ukuncintisana okuqhubekayo. Futhi lokho ngokungangabazeki kusizuzisa thina basebenzisi. Sikwazile ukwazi lokho IDisney izofika ngaphambi kokumenyezelwa ngokusemthethweni, izindaba ezinhle kulabo ababheke phambili kule nkundla.
Siyabona ukuthi kanjani amapulatifomu amanje alwela ukwanelisa amakhasimende awo ngokwandisa amakhathalogi awo. Uchungechunge olusha, amafilimu azenzele wona, nokuqukethwe okuhehayo kuyo yonke iminyaka. Okuthile, njengoba sisho, kuzuzise abasebenzisi. Maduze nje sizokwazi ukubala iDisney +, ipulatifomu ethembisa futhi ibangele ukulindela.
1 Ngabe iDisney + izonikeza ileveli elindelekile?
2 NgoMashi singabhalisela iDisney +
Ngabe iDisney + izonikeza ileveli elindelekile?
Siyazi okokusebenza okubukwayo okubukwayo okuphethwe yiDisney. a ikhathalogi enkulu lokho kukhule kuphela eminyakeni yamuva ngokutholwa yinkampani kaMickey Mouse. Izifundo ezifana Pixar, izinkampani ezinkulu ziyathanda Fox, amalungelo amasaga asezinsumansumane afana I-star wars, noma amafektri anamasiko afana nalawa Marvel seziphenduke impahla yakwaDisney.
Kukho konke lokhu singathola umbono wokuthi "konke" esingakuthola kuDisney +. Ipulatifomu enezinye Ama-movie angama-500 neziqephu zochungechunge ezingama-7.500 XNUMX, Kungaba imbangi enesibindi kunoma iyiphi ipulatifomu ehweba njengamanje. Ngaphezu kwakho konke ngoba izofuna amalungelo akho konke okuqukethwe okunikeziwe ukwazi ukusakaza zona kuphela. Okuthile okuzoba ukushaya okwengeziwe okunzima kakhulu.
NgoMashi singabhalisela iDisney +
Ukulandela impumelelo e-United States ngemuva kokuxazulula izingqinamba ezithile zokuqala, i-European premiere ingawaphula wonke amarekhodi. IDisney + ifinyelele kwababhalisile abayizigidi eziyi-10 ezinsukwini ezimbalwa ekwethulweni kwayo kwaseMelika, into ukuthi I-HBO ikwazile ukuthola ngemuva kwezinyanga ezingaphezu kwezintathu selokhu yethulwa. Futhi ngathola lokho Emahoreni angama-24 uhlelo lwakho lokusebenza luzolandwa kumadivayisi angaphezu kwezigidi eziyi-3.2.
Okumenyezelwe ekuqaleni kosuku lokugcina lukaMashi kungavezwa ngesonto. Kubukeka sengathi NgoMashi 24, amazwe amaningi aseYurophu azokwazi ukubala isicelo kanye nayo yonke imisebenzi yawo. Insizakalo eba muhle ngokwengeziwe ngokwazi ukuthi izoba nentengo ye- Ama-6,99 euros ngenyanga, noma intengo yonyaka yama-euro angama-70 kuphela. Ingabe ungomunye walabo abalinde ukushintsha iNetflix yeDisney +?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » IDisney + izofika eYurophu ngaphambi kwesikhathi ebesilindelwe
Ingabe ungomunye walabo abaxhuma kwi-Wi-Fi yehhotela lapho ufika?
Ungasebenza kanjani imodi emnyama ku-WhatsApp